Prati, yenye yezona ndawo zityebileyo eRoma | Ukuhamba kwe-Absolut
UPrati, yenye yezona ndawo zityebileyo eRoma
maruuzen | | eRoma
eRoma sisixeko esincinci esingaqwalaselwa ngeenyawo. Ukuhambahamba kwiindawo ezininzi ekuhlaleni kuyacetyiswa kakhulu ngemini enelanga, ke kolu khenketho awunakuphulukana nobuhle kunye nomtsalane mmelwane Prati.
IPrati yindawo ekuyiwa kuyo eyaziwayo ngeendlela zayo, izakhiwo zayo ezintle kunye nayo Umtsalane waseYurophu. Inobuntu obuninzi, iphantse yabonakala ngathi yiParis, ke namhlanje siza kubona ukuba yintoni esinokuyenza apha.
2 Yintoni onokundwendwela ePrati
Nguye Ikota yamashumi amabini anesibini kwikota yaseRoma kwaye idyasi yayo yeengalo ibandakanya iMausoleum yaseHadrian, enye yezona ndawo zingumfuziselo (nangona ingowaseBorgo). Kodwa yintoni imbali yale ndawo yaseRoma enomtsalane?
Umzali umzali ngamaxesha oBukhosi baseRoma la mazwe ayehlalwa zizidiliya namatyholoKe, kwathiwa nguHorti Domitii, kwaye yayiyeyomfazi kaDomitian. Emva kwexesha yatshintsha igama layo, yaya kwiPrata Neronis, kwaye ngeXesha eliphakathi yayibizwa ngokuba yiPrata Sancti Petri okanye amasimi eSan Pedro.
Indawo leyo yahlala iluhlaza de kwaphela ukuphela kwenkulungwane ye-XNUMX, phakathi kwamatyholo, imigxobhozo kunye nemihlaba yokutyisa amadlelo kuba kusekho ezinye iifama apho, ngakumbi kumathambeka eMonte Mario. Kodwa kwi1873 Umnini ngelo xesha wenxalenye enkulu yomhlaba, uXavier de Mérode, watyikitya isivumelwano kunye nomasipala sokuba aqale bumba isithili esitsha. Kwadlula iminyaka elishumi de izakhiwo zokuqala zabona ukukhanya.
Nangona kunjalo, ubumelwane buhlala buphakathi ixesha elide nanjengoko bekungekho ziseko zilungileyo kwaye kubonakala ngathi ikwanti. Ngapha koko, uMèrode ngokwakhe wahlawula epokothweni yakhe ngemisebenzi yebhulorho yentsimbi ukuvula iindlela zonxibelelwano. Kwakusekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX apho isixeko saqala ukusombulula iingxaki zasezidolophini zesithili. Njani ? Ngokusisiseko Apha iiofisi zolawulo zoBukumkani obutsha base-Itali bezakhiwe.
Ubeko lwezitalato lwenziwa ngokukhethekileyo: Intoni Akukho namnye kubo owayenokubona i-Basilica yaseSan Pedro. Ngelo xesha, ubudlelwane phakathi kweVatican kunye norhulumente omtsha babungeyona nto intle, kungoko isitalato okanye isikwere esijikeleze apha sinegama loopopu okanye iingcwele.
Imisebenzi emitsha yayiquka ukuzaliswa komhlaba, khon 'ukuze ungabandezeleka ngenxa yezikhukula zoMlambo iTiber, kodwa kwakungekho lula nokuba ngenxa yokuxinana komhlaba omanzi kakhulu. Kodwa, kunjalo, izakhiwo ezitsha zaqala ukuvela njengamakhowa, zonke ngesiqingatha sokuqala senkulungwane yama-XNUMX nakwizitalato ezifanayo.
Izitrato eziphambili zePrati zezi Ukuhamba ngeCola di Rienzo, la Ukuhamba ngeCicerone, la UMarcantonio Colonna kunye neLepanto. Zonke ezi zitrato yintliziyo kaPrati. Emantla umda wobumelwane nguDella Vittoria, empuma kunye nommelwane waseFlaminio, emazantsi ePonte nasentshona neTriininfale.
Yintoni onokundwendwela ePrati
Njengoko uhambahamba Izitrato kunye nezikwere ezibizwa ngegama lomntu wobukhosi baseRoma uza kubona izakhiwo ezithandekayo ezinje indlu yenkundla kwaye ezintle IAdriano Theatre. Le ndawo yemidlalo yeqonga yasungulwa ngo-1898, namhlanje isebenza njengemiboniso bhanyabhanya kwaye iseLa Piazza Cavour.
Ngokwenxalenye yayo, Ibhotwe lezoBulungisa lakhiwa phakathi kwe-1888 kunye ne-1910 kwaye ithathwa njengesakhiwo esikhulu, esinye sezona zibaluleke kakhulu emva kokubhengezwa kweRoma njengekomkhulu loBukumkani base-Itali. Ngenxa yobume bendawo, kunye nokufuma okungaka, kwafuneka ukuba inikwe iziseko zekhonkrithi ezomeleleyo eziye zahlala de kwaba li-70s lenkulungwane yama-XNUMX xa kwafuneka iqiniswe kwakhona. Yi baroque kunye nesitayile sokuvuselelaZiimitha ezili-170 nge-155 leemitha kwaye yiyo yonke ilitye lekalika elihamba ngeenyawo.
Prati yindawo ethuleyo, enye indlela elungileyo ukuba awufuni kuphithizela. Idityaniswe kakuhle nesinye isixeko, kodwa ihlala ihlala njalo kwaye izolile. Nkqu yindawo ekhuselekileyo kakhulu, kuba nangona ingazalwanga nentsikelelo yeVatican, indawo yokuhlala uPapa isondele kakhulu.
Eyona nto intle umntu anokuyenza kuPrati yile hamba, ulahleke ezitalatweni zayo. Ungaqala ukusuka eVatican uqobo, undwendwele iSt.Peter's Basilica okanye iVictoria Museums emva koko uqale ukuhamba. Ke, uya kubaleka ungene kwifayile ye- Icawa Yentliziyo Engcwele Yokubandezeleka, ekwabizwa ngokuba yiMilan Cathedral encinci kuba inefalo entle ye-neo-Gothic.
Ngaphakathi apha kuyasebenza IMyuziyam yeMimoya yeMiphefumlo, kumnyama kancinci, ineefoto zabafileyo ... Icawe yakhiwa ngo-1917. Ngaphakathi kukho nelungu elihle.
El Ibala leOlimpiki Kukwakhona nakwiPrati. Yavulwa ngo-1953 nangona imbali yayo isusela kwiminyaka ye-20s njengoko bekukho ibala lemidlalo elincinci elalikuloo ndawo. Nanku umsitho wokuvula nokuvala we-1960 yeOlimpiki yeHlabathi yabanjwa kwaye yahlaziywa ngokupheleleyo kwiNdebe yeFifa ka-1990 kwaye kwakhona, ngo-2008.
Esona sitrato sihle kakhulu ePrati yiVia Cola Di Riezo. Uya kubona imitya ye iivenkile zokunxiba, iivenkile ezincinci kunye neeresityu. Banamaxabiso angcono kunakwiziko lembali, ke le yindlela elungileyo yokugcina imali. Ngabahlali? Oomabhalane, oomabhalana, abantu abanemivuzo elungileyo kuba yenye yezona ndawo zoqoqosho zibalaseleyo eRoma. Lumka, ungacingi ukuba yindawo ethandwayo kakhulu enentshukumo eninzi, hayi, enyanisweni yindawo engaphandle kwesekethe yabakhenkethi kwaye ngamanye amaxesha kwanamaRoma akezi apha.
Ewe, ikufutshane kakhulu neSt. Peter's Basilica kunye neVatican, kodwa abakhenkethi abadli ngokundwendwela rhoqo. Kwaye abo bafikayo bahamba nje ngeVia Cola di Renzo, egxila ezivenkileni. Kodwa ukuba ufuna ngaphezulu, kuya kufuneka uqhubeke umgama omde. Umzekelo, ukunikezela kwifayile ye- Indawo yeViale Giulio Cesare, enye indawo eyahlukeneyo apho abantu abavela kwihlabathi liphela bahlala kunye.
Ngokucacileyo, nazi iiArabhu kunye namaIndiya, kunye neevenkile zawo ezihambelanayo. Kwaye ukuba ucwangcisa ukuhamba nge-Itali kukho ivenkile elungileyo yeencwadi, iKlabhu yokuTyelela, enayo yonke into kubahambi phakathi kwezikhokelo kunye neemephu. Umfanekiso oqingqiweyo waseDea Roma uyasamkela kwi Risorgimento Bridge. Yenziwe ngumdwebi wasePoland u-Igor Motoraj kwaye unobuso obubuhlungu kunye nothando.
Ukuhamba uya kubona ezininzi Izakhiwo zesimbo se-Umbertine, isimbo saseTaliyane esisekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX kwaye uninzi Art-Nouveau isitayile sezindlu. Kukho kwakhona izakhiwo ezinesimbo sokulinganisa, ukusuka kwixesha likaMussolini, kunye nezinye ze Uhlobo lwe-rococo. Ngokucacileyo kukwakho ezinye izakhiwo zala maxesha, ezinje ngesakhiwo seRAI, zonke zenziwe ngeglasi kunye nezipili, okanye owayesakuba ngumasipala, isakhiwo sasebukhosini esineefestile zanamhlanje ezineefestile ezimibalabala. Lowo uneefoto oza kuzithatha!
Elinye lamacandelo ePrati yile UDelle Vittorie, isithili esacwangciswa ngo-1919 ebekwe ubukhulu becala kwifayile ye- ejikeleze uPiazza Mazzini kwaye ibonakaliswe izindlu ezakhiwe ngexesha lama-fascist, kunye neenkundla ezivulekileyo eziqhelekileyo. Kuzo zonke ezi zakhiwo esele sizichonge ukuza kuthi ga ngoku, ungaphoswa ziinkcukacha ezintle ezingcangweni, kwiifestile nakwiibhalkhoni.
Ukuba uthanda ukukhwela ibhayisekile ePrati kukho iindlela zebhayisekile Ukusuka eViale Angelico ukuya eCastel Giubileo, indawo engaphaya kwedolophu kumantla eRoma. Luhambo oluhle oluhamba ecaleni konxweme lomlambo kwaye lilahleke emasimini okanye kwindawo enamaphandle eRoma. Enye indlela yebhayisekile iqala kwindawo enye kodwa ayiyi kude, ePiazza Cavour.
Ngaba zikhona iindawo eziluhlaza ePrati? Ewe, akukho ziipaki ezifanelekileyo ezikhumbula ixesha elidlulileyo kunye nezidiliya. Kukho umlambo, ibhayisekile indlela ecaleni kwakhe kulapho abantu bahlala behamba okanye bebaleka kungabi nokunye okuninzi. Mhlawumbi ibha efihliweyo kufutshane nonxweme okanye esikhepheni.
I-Prati isenokungabi yeyona ndawo ithandwayo e-Roma kodwa mandikuxelele ukuba uya nge-Agasti lelona xesha lilungileyo yabo bonke. Ngokwenyani, naliphi na ixesha phakathi kukaJulayi 1 noSeptemba 7 lixesha elilungileyo, kuba imozulu ilungile, kukho abantu ezitratweni abahambahambayo, ungandwendwela iMyuziyam yaseCastel San't Angelo ngobusuku behlobo, uhambe ngendlela ephezulu- vuka indlela yokuhamba yaseBorgo Passetto, apho uPopu abalekela eVictoria esiya kwinqaba, kwaye wancoma idome yeSt.Peter's Basilica esendleleni. Ixabiso.
Ukwenza oku kuhamba kufuneka uhlawule kodwa ngetikiti elifanayo ungatyelela inqaba kunye neeholo ezintle kunye neepatio okanye ukhuphele kwithambeka kwaye uyonwabele imibono yalo emnandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » UPrati, yenye yezona ndawo zityebileyo eRoma